Ogaden News Agency (ONA) – Magaalada Manchester oo lagu qabtay Sanad guuradi Aasaaski 29aad ee ONLF (Sawiro Filo)
Magaalada Manchester oo lagu qabtay Sanad guuradi Aasaaski 29aad ee ONLF (Sawiro Filo)
Posted by ONA Admin	/ August 26, 2013
Jaaliyada Ogadeniya ee Machester ayaa qabatay xaflad aad u balaadhan oo ay kasoo qeyb galeen dhamaanba qeybaha bulshada somalida Ogadeniya ee wadanka UK. Xafladan oo ku saabsaneyd aasaaskii sanadguurada 19aad ee Jabhada Wadaniga xoreynta Ogadeniya oo si guul iyo farxad leh loogaga ciiday magaalada manchester ee wadanka England. Xafladan ayaa waxaa lagu soo Bandhigay taariikhda Ogadeniya laga soo bilaabi waqtigii halganka Ogadeniya soo bilaawday illaa eega oo Jabhada ONLF hormuud u tahay xoriyad doonka Ogadeniya. Waxaa kale oo lagu soo bandhigay heeso halgameed, dhaantooyin ay daadihinayeen fanaaaniinta iyo abwaanada waaweyn ee qadiyada shacabka Ogadeniya, alfanaan Maxamuud Cumar Jaango iyo Fanaanka da’da yar Maxamed Yusuf yare.
Xafladan sida caadada u ah kulamada Ogadeniya waxaa lagu furay aayado Quraan ah, Heesta calanka Ogadeniyana waa lagu xijisiiyay, intaas kadib waxaa kalmadoo soo dhaweyn ah soo jeediyay Gudomiyaha Jaaliyada Ogadeniya ee Manchester mudane Maxamed Cali, oo u mahad naqay, bahweyntii iyo taagerayaasha halganka ee somaliweyn ee kasoo qeyb galay kulankan, waxaa kalo oo gudoomiyuhu ka xog waramay u jeedada loo qabanayo xafladan lagu weyneeynayo aasaaskii Jabhad Wadaniga Xoreynta Ogadeniya, isaga oo sii raaciyay qudbadiisii waxqabadka Jaaliyada iyo guulihii ay gaadheen mudooyinki u danbeeyay oo halkan lagu soo koobi karin, waxqabadkaas oo ONA si gooni ah wareysiyo ugu soo gudbin doonto dhowaan. Halgame bashiir oo ka socday maamulka Jaaliyada Birmigham ayaa halkaas isna kasoo jeediyay hadalo taariikhi ah, oo uu kaga waramayay halgamadii ka horeeyay midka maanta socda iyo sida shacabka Ogadeniya marna u daalin walina u saaranyahay tareenka dheereeya ee xoriyad doonka.
Mudane cabdircade oo kamid ah masuuliyinta sare ayaa isna halkaas kasoo jeediyay waxyaalihii usoo qabsoomay shacabka Ogadeniya 29ka sanno, Mudane Cabdi guure ayaa sheegay in halganku maanta 30 jir ku dhowaaday, midaasna ay tahay in la helo waxii 29ka sanno loo soo halgamayay. Mudane Cabdi ayaa soo bandhigay wax qabad aad loogu faanayo oo halganku gaadhay.
Gudomiyaha Jaaliyada London, Mudane Cabdi Casiis oo isna kawaramaya Waxqabadkii siyaasi ee halganka Ogadeniya usoo hoyday gaar ahaan jaaliyaadka Ogadeniya ee dibadu kaalintay ka ciyaareen halganka ayaa aheyd mid isha shacabweynihi xafladan isugu yimid aad usoo jiitay.
Ururka Dhalinyarada Ogadeniya ee OYSU manchester oo iyagu xafladan qeybta ugu weyn ka ciyaaray aggaasinkeeda ayaa ka hadlay kaalinta dhalinyarada Ogadeniya ay ka ciyaareen halgankan ay maanta JWXO hormuudka u tahay. Mudane Badar Xoghayahaya OYSU Greater manchester ayaa ku nuux nuuxsaday hadalo qiimi badnaa oo aan dhagahayga wali kasii dhamaan. midkaas oo waxqabad iyo guulo waaweyn ururweynaha OYSU soo hooyeen lagu soo bandhigay.
Waxaa soo jiidasho gooni ah lahaa, Quruxda munaasabadan sanad guurada OYSU oo aan ku koobneyn kaliya, Heeso, Gabayo, mada daaladi iyo qudbadihii lasoo jeediyay. Waxaa Goobta aan ka madhneyn dharka quruxda badan ee dadku ku labisnaayeen iyo sida loogu soo diyaar garoobay.
Doorshe (Keeg) lagu soo xardhay qurxiyay Calanka iyo astaamaha Halganka ayaa goobta la keenay, Iyada oo Gudoomiyaha Jaaliyada uu afka ka jaray, cabitaano iyo mac macaano badan oo la keenay iyo qurux badan oo gidaarada iyo meel kasta ka muuqatay madashii shirka ayaa aheyd arrimo xiiso iyo soo jiidasho gooni ah laheyd.
Caruurta ree Ogadeniya ayaa xafladan si aad ah uga muuqatay, kuwaas oo farxad badan ay ka muuqato wajiyadooda. Ciida 29aad ee aasaaski Jabhada Wadaniga Xorenta Ogadeniya waxay aheyd mid si weyn looga dareemay guud ahaanba magaalada Manchester iyo gobolada ku xeegaaran. hooyoyinka Iyo masuuliyiinta ururka haweenka jaaliyada greater manchester ayaa halkaas hanbayo uga diray ciidanka qalabka sida ee JWXO. goobkasta oo la isugu yimaado inkasto arrin lagu yaqaano tahay in ciidanka loo hanbalyeeyo laguna faano hadana munaasabadan waxaa si gooni ah loogu xusay halyayada JWXO, intii shahiiday, inta nool ee jiida hore kujirta.
Sawiradi Xafladan iyo muuqale kaleba ONA kala soco.
sanad guuradi 29 aad dhaha ma’aha 19 aad